“ယုယ - နွေးထွေးသော ဘ၀လေးတစ်ခု”: “ စကားလုံး အလင်္ကာ ”
“ဟန် ကိုယ့်ဖို့” ဟူသော စကားလုံးကို ကျွန်တော် သိပ်ဘ၀င်မကျချင်။ ထို့အတူ “မာန် သူ့ဖို့” ဟူသော စကားကိုလည်း စိတ်သဘောမကျလှ။ လူလူချင်း ဆက်ဆံရာတွင် “ဟန်တွေလုပ်” “မာန်တွေ ဖီ” နေသော် ပြေပြစ်ချောမွေ့စရာ မဖြစ်နိုင်။ မရှိဘဲ ရှိလေဟန်ဆောင်၊ မတတ်ဘဲ တတ်လေဟန်ဆောင်၊ မာန်တက်၊ သိပ်တော့ မနိပ်လှ။ မနိပ်သော်ငြား ထိုလိုလူစား များနေသလား မသိ။
ထို့အတူ မတရားမှု ကျူးလွန်ထားပြီး တရားသဖြင့်နေသော “သူတော်” ယောင်ဆောင်သူတွေလည်း ရှောင်မရ။ သို့ဆိုလျှင် ဟန်မလုပ်၊ မာန်မတက်ဘဲ ရိုးရိုးစင်းစင်းနေသူကော မရှိလေသလား။ နည်းလျှင်သာ နည်းမည် ရှိတော့ ရှိမည်သာ။ ထိုသူမျိုးကို သူတို့က Easygoing ဟူသော အကျင့်စရိုက်ကို ဖော်ပြသည့် နာမ၀ိသေသနနှင့် တွဲပြီး ဖော်ပြသည်။ ဟန်မဆောင်၊ ဟိတ်ကြီး ဟန်ကြီး မလုပ်တတ်သည့် သဘော၊ ရိုးသားပွင့်လင်းသော သဘော၊ ရင်းနှီး ဖော်ရွှေသော သဘော၊ ဖက်လှဲတကင်း ရှိသောသဘော စသည်တို့ကို ဆောင်ပါသည်။
I am an easygoing person but not gullible.
ကျွန်တော်က ရိုးရိုးအေးအေး နေတဲ့သူပါ၊ ဒါပေမယ့် ငထူ ငတုံးတော့ မဟုတ်ဘူး။
Posted by Yu Ya at 11/07/2009 01:57:00 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
တစ်ကွ..... ဟားဟား ကိုယုယ ဆီမှာတစ်ရပြီကွ
မှတ်သားသွားပါတယ်ဗျာ... အစ်ကိုရေ ဗဟုသုတ ရလို့ကျေးဇူးပါဗျာ....
ကြောင်သူတော်ဆိုတဲ့စကားလုံး တွင်ကျယ်လာတာ လူတွေကြောင့်နဲ့တူတယ်ဗျ
မြန်မာစကားတွေက လိုက်လေမဆုံးလေနဲ့ တချို့များ သိပ်အဓိပ္ပါယ်ရှိတာပဲ
သို့သော်..နည်းနည်း ထူထူတုံးတုံးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်
ဟန်တွေမာန်တွေ တခွဲသားနဲ့ လူတွေများနေကြတော့လည်း စကားလုံးတွေမှာပါ အဓိပ္ပါယ် တွေ အများကြီးရှိလာကြတယ်ထင်ပါရဲ့ ။
easygoing ( adj ) ကို နောက်တနည်း --
: အပူအပင်မထားသော။ခပ်ပေါ့ပေါ့ သဘောထားသော။ လို့ လည်းဆိုကြတယ် တဲ့ ။
အဲ့လိုကြတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်လို ဖြစ်နေပြန်ရောလား ။
အဓိပ္ပါယ် တွေ အများသားရယ်နော် ..
easyrider လို့ခုခေတ်လူငယ်တွေ ပြောဆိုနေတာ ကျ တော့ ဘယ်လိ်ု ဘာသာပြန်ရင်ကောင်းမလည်း ....? ?
သိရင် ပြောပြပေးပါ ကို ရူးရ ..အဲ.. ကိုယုယ ရေ ......( တကယ် သိချင်လို့ မေးတာနော် .. နောက်တာ မဟုတ်ရ ပါကြောင်း ... )
ကောင်းပါတယ် ဗျို့ ရိုးရိုးအေးအေး နေနိုင်ဖို့ ဆိုတာတော့ ကြိုးစားကြည့်ရတာပေါ့ဗျာ...။
အင်္ဂလိပ်စာပေရဲ့ အလင်္ကာဖွဲနွဲ့ပုံတွေအကြောင်း အချိန်ရရင် ရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ...
မအယ်ကတော့ ဟန်လုပ်တာတွေ မကြိုက်ဘူး။
သူများ ဟန်လုပ်နေရင်လည်း မုန်းပါ့။
ပါးစပ်ကသာ မအယ်က အဲ့လိုပြောတာ ကိုယ်တိုင်ကတော့ မပြည့်ဝလို့ ဟန်များတဲ့ခါ များတာမှ လွန်ရောပါပဲ။ တခါတလေ ကိုယ့်ကို ကိုယ်တောင် ရှက်မိပါရဲ့။:)
အဲဒီ စာသားလေးကို ကြိုက်တယ်
ကျနော်ကတော့ ငတုံးတယောက်ပါ ဒါကြောင့် ရိုးရိုးလေး မနေတတ်ပါး)
အဲဒီအသုံးလေးကို ကြားဖူးတယ် ဒါပေမယ့် ကိုသုံးတဲ့ အခါတော့ Flexible ဆိုလေးပဲ သုံးဖြစ်တယ်
Easygoing ဆိုတာကို သိပ်မသုံးဖြစ်ဘူး
အတွေးလေး က လှပ တယ်
ရိုးသားဖို့ က အဓိကပါ ယုယ ရေ
ကိုယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ် မကြိုက်ရင် မကြိုက်ဖူး
အဲဒီ အကြောင်းအရာတွ ကို အခြေအနေ အချိန်အခါ အကျိုးအကြောင်း သင့်သလို ကြည့်ပြီး အပြစ်ကင်းကင်း နေထိုင်ဆက်ဆံသွားနိုင်တဲ့သူ က ..လူသား ဆန်တဲ့ လူတွေ ဖြစ်မယ် လို့ မမ တော့ ထင်မိတယ်
ဟုတ်တယ် ကိုယုယ ရေ ရိုးသားခြင်းက အဓိကပဲ ။
ရိုးရိုး အေးအေးနေနိုင်ရင် တော့အကောင်းဆုံးပေါ့။
ကိုယုယရေ ရိုးရိုး အေးအေးနေသူတွေ ရှိတော့ရှိတယ် ရှားသွားပြီ။ :)
အဲဒါ သမီးကြီးကိုပြောတာနော်။ ဟဲဟဲ
ဟုတ်ပါ့ ဗျား ဟန်လဲမလိုဘူး မန်လဲမလိုဘူး အဲဒါတွေလိုတဲ့ သူဟာ စောစောကပြောတဲ့(အီးစီးဂိုးရင်းလိုက်ဖ်) နဲ့ ဝေးသည်ထက်ဝေး သွားနိုင်တယ် ဟန်တွေ မန်တွေရှိနေတဲ့ သူ ကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံ၇တာထက် ရိုး၇ိုးအေးအေးလူကိုဘဲဆက်ဆံချင်တယ် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာ လွတ်လပ်မှု အပြည့် ရှိလို့ ပါ အဲဒီဟန်တွေ မန်တွေနဲ့ဆက်ဆံရတာ ပြည့် စုံလုံခြုံမှုတွေကင်းမဲ့ နေတယ်လို့ ခံစားမိလို့ ပါ ခင်တဲ့သုဒြေ္န
ကြောင်သူတော်ကြွက်သူခိုးတွေ ရွှေပြည်ကြီးမှာ မှိုလိုပေါက်နေပါပေါ့
အင်္ဂလိပ်စာပေရဲ့ အလင်္ကာဖွဲနွဲ့ပုံတွေအကြောင်း အချိန်ရရင် ရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်
copy by ko Luu Htwe
အရမ်းကို သဘောကျတဲ့ စာသားလေးပဲ